I-Upper Deck - I-Quayside Loft Ehlukile Enendawo Yokupaka Yamahhala - I-Airbnb
I-Upper Deck - I-Quayside Loft Ehlukile Enendawo Yokupaka Yamahhala
Mevagissey, Cornwall, i-United Kingdom
Isinyathelo sisuka ohlangothini lwetheku olujabulisayo lwedolobhana elisebenzayo lokudoba uye endaweni yale ndlu ebabazekayo eguqulwe inetha yekhulu le-18. Ngokuthintwa komklami okuhle okugqamisa ukukhanga kwenkathi, leli khaya lihlanganisa ikhulu le-18 nelama-21 ngokumatanisa ngaphandle komthungo ikhishi elibushelelezi, elihlome ngokuphelele elinothango bendabuko baseMpumalanga kanye namazwi ase-Asia. Emnyango kunenqwaba yamathilomu, ama-boutiques, izindawo zokudlela kanye nama-pubs.
Inqobo nje uma, mahhala ezivakashini, imvume yokupaka eyodwa ye-Mevagissey Harbour park etholakala endaweni yohambo olufushane engaphansi kwemizuzu emi-2 ukusuka efulethini lakho.
Isinyathelo sisuka ohlangothini lwetheku olujabulisayo lwedolobhana elisebenzayo lokudoba uye endaweni yale ndlu ebabazekayo eguqulwe inetha yekhulu le-18. Ngokuthintwa komklami okuhle okugqamisa ukukhanga kwenkathi, leli khaya lihlanganisa ikhulu le-18 nelama-21 ngokumatanisa ngaphandle komthungo ikhishi elibushelelezi, elihlome ngokuphelele elinothango bendabuko baseMpumalanga kanye namazwi ase-Asia. Emnyango kunen…
“Izivakashi zethu zithanda ukunethezeka nedizayini ye-chic, ehambisana nesimilo nenhle yesakhiwo.”
– Daniel, umbungazi wakho
Ama-Amazon Echo, I-Heated towel rack, I-Smart TV, Umatilasi oyi-Pillow-top, Umbhede omkhulu
Imipheme eyenza ikamelo libe mnyama, I-TV, Umatilasi oyi-Pillow-top, Umbhede omkhulu, Umshini odlala si-DVD, Uvulandi
4.99 (izibuyekezo ezingu-153)
IMevagissey iyidolobhana lendabuko lokudoba elinemigwaqo eboshwe ngamatshe, amakotishi ajwayelekile, izitolo, nezindawo zobumnandi. Shaja isikebhe, phonsa ulayini ku-Lighthouse Quay, futhi udle izinhlanzi zasendaweni kwenye yezindawo zokudlela. Imyuziyamu kanye ne-aquarium kutholakala eduze.
Ibanga ukusuka e- Cornwall Airport Newquay
Imizuzu engu-37 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$376.
Hlola ezinye izinketho ezise- Mevagissey namaphethelo